Elizabeth Gaskell. 5 makuru mabasa emunyori weVictorian | Zvazvino Zvinyorwa
Elizabeth Gaskell akaberekwa musi waSeptember 29, 1810 muChelsea, London. Aive rimwe remazita makuru echikadzi mu Victorian novel mune yayo chaiyo inoshanda vhezheni. Aive shamwari naye Charles Dickens uye aizivikanwa kwenguva yakareba kunyanya kwaari biography yaCharlotte Brontë.
Nhasi ndinoongorora 5 emazita ake ane mukurumbira kuti iwe ungazive kana kuti wakaona uchishandurwa paterevhizheni, senge Kuchamhembe nekumaodzanyemba. Asi ivowo Mary barton, Imba yePáramo, Gothic Tales kana Sylvia's Vanoda
2.2 Gothic ngano
2.3 Kuchamhembe nekumaodzanyemba
2.4 Imba yemamoor
2.5 Zvinodiwa naSylvia
Basa uye chimiro chaElizabeth Cleghorn Gaskell chakadzoswazve nekufamba kwenguva, pamwe nekuti zvinyorwa zvenguva yeVictorian hazvina kubvira zvabuda musitaera. Uye iyo mufananidzo wemagariro iyo yaakaratidza mumanovel ake ndeye yezvakanakisisa izvo zvinogona kuwanikwa. Zvakawanda zvekuti zvakakwezva zvese kufarira kwevanyori vezvakaitika kare uye vanoda zvemhando iyi. Saka hazvina kana kunonoka kuti uwane. Izvi ndizvo 5 ake anozivikanwa mabasa.
Yaiva yake yekutanga novel uye ane iyo ruzivo rwako pachako yaGaskell, uyo, semukadzi wemufudzi, aizvionera ega iyo mamiriro ehupenyu evashandi veManchester uye mhedzisiro yeRevolution Revolution.
Iyo nyaya ye musikana anotamba nerunako mwanakomana akanaka weiye waanoshandira uye anozvidza mupfuri uyo angamupa hupenyu hwake. Zvese zviri pakati penzvimbo yemakakatanwa makuru eruzhinji nekuda kwehurombo nekushaikwa kwemabasa.
Iwo echinyakare zvinhu zveGothic genre ivo vari, pakati pevamwe, kunyangarika kusinganzwisisike, mweya yekutsiva, mbiri-hupenyu hwevanoremekedzwa kana kutukwa kwakakiiwa munhare dzinogara. Y ivo vakwezvawo Gaskell.
Mune izvi Gothic ngano zvinosanganisirwa vamwe se Muroyi Roisi, nhoroondo yekuvhimwa kwe salem varoyi muna 1692. Kana Kuda kuziva, kana ichokwadi, iko a akarasika mutorwa ari musango anoshanyira mutorwa vanhu vanotaura nyaya vachisangana fairies.
Imwe yeakakurumbira pamwe, akashandurwa ku hit tv series kune iyo chikamu BBC in 2004.
Anotaura nyaya ya Margarethe, mukadzi wechidiki anobva kumaodzanyemba kweEngland uyo, nekuda kwemamiriro ezvinhu emhuri, anomanikidzwa kuenda kuchamhembe. Icho chifananidzo chikuru chemagariro uye zvematongerwo enyika makakatanwa akatorwa kubva mukuchinja kwemaindasitiri. Kuna Margaret, kumaodzanyemba idyll yekumaruwa uye iyo yekuchamhembe yakasviba, yakaoma uye ine mhirizhonga. Nekudaro, sezvaanopindirana nenyika nyowani, kukwezva kuri kukura kuna John Thornton, muridzi wefekita yemachira, anochinja maonero ake uye kufungira zvisizvo.
Yakabudiswa se Nyaya yeKisimusi pakupera kwe 1850 uye yakanaka nyika rudo nyaya yakavhenganiswa nekubata kwechinyakare ngano senge iyo iri mu Cinderella. Zvese kukwidziridza iyo kunaka, kufarira uye mutsa, hunhu hwaMaggie Browne, protagonist yaro. Maggie anogara na amai vasina hanya uye hama ine chinzvimbo uyo anomubata zvisina kunaka uye anomushora zvakaenzana. Kukwezva kwayo uye rudo rwakadzoserwa nemudyi wenhaka ivo vachatungamira iye kumurwirakukurira kusawirirana munharaunda izvo zvinomuparadzanisa nerudo rwake. Uye ichasundidzirwa zvakare mu chibayiro chikuru kununura mhuri yake isingaongi.
Un rudo katatu ndiyo hwaro hwenyaya iyi apo varume vaviri yeakasiyana kwazvo mavara sivo vanodanana naSylvia Robson, musikana wechidiki anobva kumatunhu. Ivo ndivo mutengesi Firipi Hepburn uye harpooner Charley kinraid. Asi vese vatatu vanogovana chakavanzika izvo zvinokanganisa ramangwana rako. Iyo nyaya inoitika mune yeChirungu chiteshi cheguta panguva ye napoleonic hondo.
Icho chifananidzo chitsva chetsika uye maitiro enharaunda yekumaruwa, uko kurongeka, kuzvimirira, rudo uye manyepo anokwanisa kusimudzira nekuparadza hukama hwevanhu. Gaskell akazvitsanangura mumashoko ake se basa rinosuruvarisa zvikuru raakanyora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Elizabeth Gaskell. 5 makuru mabasa emunyori weVictorian